Huawei P9 Vs Samsung Galaxy S7, duel tsy mitovy? any an-tampon'ny havoana avo lenta | Vaovao momba ny gadget
Huawei P9 Vs Samsung Galaxy S7, duel tsy mitovy? any an-tampon'ny havoana
Tamin'ity herinandro ity ary taorian'ny tsaho sy fivoahana betsaka dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ilay vaovao. Huawei P9. Ity smartphone vaovao avy amin'ny mpanamboatra sinoa ity dia ho ampahany mivantana amin'ny fianakavian'ilay antsoina hoe tsena avo lenta izay hihaonany amina havoana hafa toa ny LG G5, ny iPhone 6S na ny Samsung Galaxy S7, izay atrehantsika anio ity duel ity, any an-tampon'ny havoana avo lenta, saingy toa manana mpandresy mazava izany, na dia hamafisina aza ny fahambonian'ny terminal Samsung ?.
Na dia izao aza dia hanohy hampitaha ireo terminal roa isaky ny teboka isika efa misy lafiny iray izay mamaky mazava tsara ny Huawei P7 ny Galaxy S9 ary tsy iza izany fa ny varotra. Ny terminal Korea Selatan dia efa an-tsena nandritra ny herinandro vitsivitsy izao, mijinja tarehimarika amin'ny varotra manan-danja, ary ny fahombiazan'ny P9 dia mbola hita ihany.
Huawei dia nanalavitra ny hetsika lehibe foana ary efa an-taonany maro izy no nanolotra ny fikarohana lehibe indrindra ivelan'ny hetsika lehibe toy ny MWC. Izany no mahatonga azy hanana toerana ambony, nefa koa ny fotoana raha ampitahaina amin'ny fitaovana finday hafa. Amin'ity indray mitoraka ity dia manana tombony lehibe ny Galaxy S7, izay ho hitantsika izao raha amin'ny lafiny rehetra na amin'ny sasany ihany.
1 Volavola; fandresena ho an'i Huawei amin'ny antsipiriany kely
2 Efijery; ny Samsung Galaxy S7 dia mandray ny fandresena tsikelikely
3 Processor sy fahatsiarovana
4 Fakan-tsary, ilay duel tena izy any amin'ny avo
6 Didim-pitsarana; duel tsy misy mpandresy, farafaharatsiny izao
Volavola; fandresena ho an'i Huawei amin'ny antsipiriany kely
Raha mijery an'ity Huawei P9 ity isika dia ho tonga saina haingana fa miatrika terminal isika izay niasa sy nohosorana tamin'ny endriny lehibe ny endriny. Tsy ny famolavolana ny Galaxy S7 dia mbola tsy namboarina sy nololaka, fa ny antsipiriany sasany, hahatratrarana ny tonga lafatra, dia mbola miandry ihany.
Ny smartphone vaovao an'ny mpanamboatra sinoa dia manana lafiny eo alohan'ny hamenoan'ny efijery ny habaka rehetra, mamela ny sisiny eo amin'ny 1,7 milimetatra fotsiny. Ity dia tsy hoe tsara tarehy fotsiny, fa mampihena be ny haben'ny terminal ihany koa. Ankoatr'izay, Huawei dia nahavita namaha ny iray amin'ireo olana goavana amin'ny ankamaroan'ny mpamokatra, Samsung eo amin'izy ireo, ary tsy iza izany fa ny vinavina. an'ny fakan-tsary any aoriana.
Tsy toy ny Samsung Galaxy S7, ny fakantsary amin'ny Huawei P9 dia tafiditra tanteraka ao amin'ilay fitaovana, tsy misy na inona na inona mivaingana.
Ary farany amin'ny resaka famolavolana dia tsy maintsy asongadintsika ny Huawei P9 izay hamely ny tsena amin'ny loko efatra samy hafa; volondavenona mainty, fotsy, volamena ary raozy volamena. Isaky ny andiany kinova ireo dia tsy hitovy ny famaranana ary ohatra ny terminal fotsy misy famaranana laminated izay mampahatsiahy antsika ny seramika, raha ny lokon'ny volondavenona dia manome antsika famaranana vy vita amin'ny vy.
Efijery; ny Samsung Galaxy S7 dia mandray ny fandresena tsikelikely
Raha ataontsika mifanatrika ny Huawei P9 sy ny Samsung Galaxy S7 ary tsy mijery afa-tsy ny efijery isika dia kely dia kely ny fahasamihafana ary amin'ny tranga misy ny terminal mpamokatra sinoa dia hahita Tontonana IPS 5,2-inch miaraka amina vahaolana feno HD 1.920 1.080 x XNUMX teboka. Samsung tamin'ny lafiny iray dia nanapa-kevitra ny hametraka a Tontonana Super AMOLED miaraka amina vahaolana Quad HD 2.560 x 1.440 teboka.
Ny efijery an'ny terminal Samsung dia manome antsika 576 teboka isaky ny santimetatra, raha ampitahaina amin'ny 423 teboka an'ny Huawei P9. Tsy isalasalana fa zava-dehibe io, na dia ny efijery iray manontolo sy ny endriny aza no mahatonga anay hanambara ny smartphone an'ny orinasa Koreana Tatsimo ho mpandresy amin'ity fizarana ity.
Processor sy fahatsiarovana
Raha mijery ao anatin'ireto fitaovana finday roa vaovao ireto isika dia mahita ny mpikirakira azy manokana. Amin'ny tranga Samsung Galaxy S7 dia mahita processeur valo-core isika Exynos 8890, izay miasa efatra amin'ny hafainganam-pandeha 2,3 GHz ary efatra hafa hanao izany amin'ny 1,6 GHz. tohanan'ny fahatsiarovana RAM 4GB dia mahita hery lehibe izahay izay hahafahan'ny mpampiasa manatanteraka hetsika na mampiasa ilay fitaovana amin'ny zavatra rehetra azonao eritreretina .
Amin'ny tranga Huawei P9 dia ny processeur a HiSilicon Kirin 955, miaraka amin'ny cores 8, ny 4 amin'izy ireo dia Cortex A72 mihazakazaka amin'ny 2,5 GHz ary ny core efatra hafa dia Cortex A53 ary mihazakazaka amin'ny 1,8 GHz. ary tahiry 3GB ary iray hafa misy RAM 32GB sy fitehirizana 4GB. Amin'ireo tranga roa ireo, ny fahefana atolotray antsika ho an'ny mpampiasa antonony dia azo antoka fa ho mihoatra ny ampy.
Amin'ity fizarana ity dia tsy azo atao ny manambara mpandresy satria ny terminal dia samy manana ny mampiavaka azy hatrany raha toa ka misy ny processeur ary raha tsy misy ny fitsapana ny Huawei P9 vaovao dia tena sahy mifidy ny iray na ny iray hafa.
Fakan-tsary, ilay duel tena izy any amin'ny avo
Ny fakantsary fakan-tsarimihetsika dia matetika iray amin'ireo lafiny manan-danja indrindra ho an'ny mpampiasa ary noho izany dia iray amin'ireo ezahin'ny mpanamboatra hatsaraina indrindra isan-taona. Amin'ny tranga Samsung sy Huawei, tsy misy isalasalana fa niasa betsaka izy ireo tamin'ny taona lasa ary ny fanatsarana natao ho an'ny Galaxy S7 sy ny P9 dia tena zava-dehibe sy mahaliana.
Manomboka amin'ny Huawei P9, izay vao haingana indrindra hatramin'ny nanolorana azy, ora vitsy lasa izay, afaka miteny isika fa ilay mpanamboatra sinoa dia nahita mpiara-miasa tonga lafatra ao Leica, iray amin'ireo marika manandanja indrindra eo amin'ny tontolon'ny sary. Ny fakantsary amin'ity terminal vaovao ity dia misy lente roa miaraka aminy roa sensor 12 megapixel samy misy fisokafana f / 2.2 y 27 milimetatra halava mifantoka.
Ny iray amin'ireo sensor ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fakana sary miloko ary ilay sensor kosa dia mifantoka amin'ny famirapiratan'ny sary sy amin'ny antsipirian'ny sary. Raha ny fahitana azy, amin'ny sary voalohany nalaina niaraka tamin'ny P9, manaitaitra tsotra izao ny kalitaony.
Araka ny voalazan'ny Huawei tenany ihany, ny pixelan'ny sensor tsirairay dia manana habe 1,25 um, izay raha atambatra dia miteraka isa 1,76 um. Raha ampiantsika izany rehetra izany dia mahazo sary mamiratra kokoa isika noho ireo izay azo amina terminal hafa ary koa misy fivoarana mihatsara kokoa.
Fampitahana amin'ny Samsung Galaxy S7, izay efa hitantsika rehetra ny kalitao atolony antsika rehefa maka sary dia ho sarotra. Ary ilay fakan-tsarin'ny terminal Samsung dia mampiditra sensor roa misy 12 megapixels tsirairay avy. Tsy toy ny fitaovan'ny Huawei, ity iray ity dia tsy mampiditra lens roa, fa iray. Raha ny filazan'ny mpanamboatra Koreana Tatsimo dia mamela fifantohana eo no ho eo sy sary miaraka amin'ny famirapiratana 95% kokoa.
Tsy misy isalasalana fa Samsung sy Huawei dia nanao filokana tena lehibe ho an'ny fakantsary misy ny terminal misy azy ireo ary ny tsara indrindra amin'ny Galaxy S6 sy ny Huawei P8 dia miharihary. Raha ny amin'ny fisafidianana ny fakantsary tsara indrindra, mieritreritra aho fa mandra-pahatongarantsika ny P9 vaovao amin'ny halaliny dia tsy ho vita ny manapa-kevitra. Efa fantatsika izay azon'ny Galaxy S7, izay mahafinaritra tsotra fotsiny, saingy tsy fantatsika mazava izay azon'ny Huawei P9, na dia avy amin'ny zavatra hita aza, ny kalitaon'ireo sary dia mety ho avo kokoa noho ilay iray aza. natolotry ny terminal Samsung.
Farany dia hijanona sy handinika ny bateria ampidirin'ny terminal tsirairay isika, ary noho izany ny fizakantenany omeny antsika.
Ny batterie samy ao amin'ny Samsung Galaxy S7 sy Huawei P9 dia mahita bateria mahatratra 3.000 mAh izahay, ary ny fitaovana roa koa dia manana famahanana haingana ihany koa, endri-javatra mahaliana kokoa noho ny mahaliana, indrindra ho an'ireo mpampiasa mandeha foana tsy misy batterie loatra ary maika.
Raha tsy misy ny fitsapana ny Huawei P9, ny finday avoakan'ny mpanamboatra sinoa dia mety hanana tombony kely amin'ity sehatra ity amin'ny alàlan'ny fametrahana efijery misy vahaolana ambany kokoa, izay hahitana fandaniana ambany kokoa raha oharina amin'ny efijery an'ny Samsung Galaxy S7.
Didim-pitsarana; duel tsy misy mpandresy, farafaharatsiny izao
Na dia tsy maharesy lahatra ahy mihintsy aza ilay hevitra, mieritreritra aho fa tokony ary tokony hiala amin'ity duel ity raha tsy misy mpandresy. Ny Samsung Galaxy S7 dia nanavao kely dia kely tamin'ny lafiny rehetra, na dia nihatsara kely aza tamin'ny lafiny maro. Mazava ho azy, tsy nila be loatra ny manohy tsy misy fisalasalana fa iray amin'ireo terminal tsara indrindra eny an-tsena.
Amin'ny lafiny iray, Huawei dia nahavita nanatsara ny endriny bebe kokoa, manohy manapaka ny sarin'ny efijery, mahazo fakantsary saika tonga lafatra ary koa tsy manaisotra hery kely amin'ity Huawei P9 ity.
Mamatotra amin'ny havoan'ny havoana, na dia angamba rehefa afaka mizaha toetra ny vavahady Huawei vaovao amin'ny lalina isika dia afaka manome mpandresy an'io duel io.
Iza no mpandresy ho anao amin'ny duel eo amin'ny Huawei P9 sy Samsung Galaxy S7?. Azonao atao ny manome anay ny hevitrao amin'ny habaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Huawei P9 Vs Samsung Galaxy S7, duel tsy mitovy? any an-tampon'ny havoana
Noho ny fahasamihafana eo amin'ny vidiny dia hanova ny Iphone5 ho an'ny Huawei P9 aho
Ahoana no ahafantarana raha angalarina finday iray
Tetika 5 hitahiry angona amin'ny findainao